Izicelo ezijwayelekile ze-Ultrasonic Disersers - Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Izicelo ezijwayelekile ze-Ultrasonic Disersers"
Izihlanzayo ze-Ultrasonic ziyithuluzi elithembekile lokusabalalisa nokuhlakazeka kwezinhlayiyana ezincane ezinobukhulu obulinganayo. Ngaphandle kwesicelo esivamile sokuhlakazeka, abahlakazeli be-ultrasonic (ababizwa nangokuthi ama-probe-hlobo ultrasonicators) asetshenziselwa ezinye izinqubo eziningi kwelebhu nakumkhakha.
Izinkambu zesicelo sokuhlanza i-ultrasonic zifaka izingxube ze-liquid-solid, emulsation, isizinda, ukuhlakazeka kanye nokuhlolwa kweseli, ukusabela kwe-sonochemical nokunye okuningi.
Izicelo ezijwayelekile zabahlakazeli be-ultrasonic ukukhiqizwa kwe-nano-emulsions ezinzile ne-luspensions; Ukulungiswa kwesampula isib. Amasampula omhlabathi ukukhomba ubukhona be-polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); Ukunciphisa kanye nokwenza ngamasampula; kanye nokusebenza, ukwenza kusebenze kanye nokuhlanza izindawo ezihlangene (isib. ama-catalysts).
Funda kabanzi mayelana nabahlakazeli be-ultrasonic kanye nezinhlelo zokusebenza eziningi, lapho i-sonication ingakwazi ukwenza inqubo yakho!
I-silica nanoparticles efana ne-silica enefutha (isib. I-Aerosil) iyisengezo esisetshenziswa kabanzi ezimbonini ezahlukahlukene. Ukuze uthole i-nanosilica esebenza ngokugcwele enezinto ezibonakalayo ezifunwayo, izinhlayiya ze-silica nano kufanele zisuswe futhi zisatshalaliswe njengezinhlayiya ezihlakazeke zodwa.…